विश्वप्रकाश र गगन पहिला घनिष्ठ मित्र, अहिले कुर्सीका लागि प्रतिस्पर्धी, एउटै रिङमा लड्दै
September 16, 2021 N88LeaveaComment on विश्वप्रकाश र गगन पहिला घनिष्ठ मित्र, अहिले कुर्सीका लागि प्रतिस्पर्धी, एउटै रिङमा लड्दै
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । कांग्रेसको महामन्त्रीमा अहिलेसम्म गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मात्र औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आकाक्षी त धेरै छन, तर घोषणा गर्नेमा विश्वप्रकाश र गगन मात्र अहिलेसम्म देखिएका छन् । थापाले गत भदौ १४ गते आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं क्षेत्र नम्वर ४ अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं […]
कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहमा आ–आफ्नै डम्फू बजाउन रोकिएन, देउवाकै पल्लाभारी
September 16, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहमा आ–आफ्नै डम्फू बजाउन रोकिएन, देउवाकै पल्लाभारी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै लज्जाजनक अवस्थामा छ । पटकपटक गरी डेढ वर्ष आफ्नै कार्यकाल थपेको केन्द्रीय नेतृत्वले फेरि पनि आफ्नो म्याद बढाउने प्रपञ्च गरिरहेको छ । कुनै पनि भातृ संगठन सग्लो र अद्यावधिक छैन । युवा तथा विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने संगठनमा बा होइन, हजुरबा पुस्ता हावी छ । मूल नेतृत्वको चौतर्फी अक्षमताले पार्टीको […]
सत्ता गठबन्धन दुर्घटनाग्रस्थ, नयाँ खेलको तयारी
September 16, 2021 N88LeaveaComment on सत्ता गठबन्धन दुर्घटनाग्रस्थ, नयाँ खेलको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको मंगलबार दुई महिना पूरा भएको छ। सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि पाँच दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन , सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार उनी मुलुकको ४२ औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । यता दिन […]
आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर हिँडेका माधव नेपाल के फेरि पार्टी फुटाउन आउने ?
September 16, 2021 N88LeaveaComment on आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर हिँडेका माधव नेपाल के फेरि पार्टी फुटाउन आउने ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अब माधवकुमार नेपाल आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले पार्टीमा गुटबन्दीमात्र गरेको उनले बताए । काठमाडौं जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मा उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले माधव कुमार नेपाल लाई एमालेकै फर्किन आग्रह गरेकी थिइन् ।नेता नेपाल आफूहरुको नेता भएको, एमाले बनाउन जीवन दिएको भन्दै उनले […]
माओवादी केन्द्र पार्टी होइन, त्यो त प्रचण्ड गुट मात्रै हो – ओली
September 16, 2021 N88LeaveaComment on माओवादी केन्द्र पार्टी होइन, त्यो त प्रचण्ड गुट मात्रै हो – ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको शक्ति कम नभएको बताउनुभएको छ । काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नेकपा एमालेलाई सिध्याउन खोजिएको थियो, तर सचेत कार्यकर्ता पंक्ति जुरुक्कै उठ्यो । र, पार्टी भत्काउन दिँदैनौँ । मास्न दिँदैनौँ भनेर रक्षामा उभियो । र, आज पार्टी ज्युँकात्युँ […]
मदन भण्डारी किन मारिए ? बादलले खोले रहस्य
September 16, 2021 N88LeaveaComment on मदन भण्डारी किन मारिए ? बादलले खोले रहस्य
काठमाडौं । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राजतन्त्रको विपक्षमा उभिँदा मदन भण्डारी मारिनु परेको बताएका छन् । जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै बादलले राजतन्त्रको विपक्ष र गणतन्त्रको पक्षमा उभिँदा मदन भण्डारी मारिनु परेको बताएका हुन् । वर्ग संघर्ष र यससँगै राजनीतिक दलको विकासको व्याख्या गर्ने क्रममा उनले दलहरूमा र तिनका नेताहरूमा […]
आफ्नै पार्टी र गठबन्धनका नेताले टेर्न छाडेपछि दिनमा ‘बरालिँदै’, ‘रातमा बर्बराउँदै’ प्रचण्ड !
September 16, 2021 N88LeaveaComment on आफ्नै पार्टी र गठबन्धनका नेताले टेर्न छाडेपछि दिनमा ‘बरालिँदै’, ‘रातमा बर्बराउँदै’ प्रचण्ड !
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजकल अलिकति तनाव अवस्थामा रहेका छन् । उनी सहभागी भएका पछिल्ला कार्यक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने उनी अलिकति पनि खुशी छैनन् । उनी आफू तनावमा रहेको कुरा आजकल सार्वजनिक रुपमा नै प्रस्तुत गर्न लागेका छन् । यसको उदाहरण उनी सहभागी भएको पार्टी तथा अन्य […]
गठबन्धनको सरकार निरिह ! प्रचण्डका कारण कांग्रेसलाई धक्का, ओलीपछि देउवाको कुरा का’ट्न थाले
September 16, 2021 N88LeaveaComment on गठबन्धनको सरकार निरिह ! प्रचण्डका कारण कांग्रेसलाई धक्का, ओलीपछि देउवाको कुरा का’ट्न थाले
काठमाडौं । सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिना भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार निरिह बनेको छ । मन्त्रीहरू बन्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घुमाउन थालेका छन् । प्रचण्डले असहयोग गरेकै कारण देउवाले दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद समयमा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसलाई माओवादीसँगको गठबन्धन कहिल्यै […]
जाेडदार भूकम्पकाे धक्का ३ जनाकाे मृत्यु, ६० घाइते
September 16, 2021 September 16, 2021 N88LeaveaComment on जाेडदार भूकम्पकाे धक्का ३ जनाकाे मृत्यु, ६० घाइते
एजेन्सी । चीनको सिचुआनमा शक्तिशाली भूकम्प आएको छ । भूकम्पमा परी अहिलेसम्म कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको र ६० जना घाइते भएका पुष्टि गरिएको छ । घाइतेहरू सबैको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । देशको सिचुवान प्रान्तअन्तर्गत पर्ने लुक्षिन क्षेत्रमा भूकम्प आएको हो […]
संखुवासभा ह’त्या’का’ण्ड’मा नयाँ ट्वि’स्ट : अर्का एक व्यक्ति पनि प’क्रा’उ, अनुसन्धानले लियो नयाँ मोड
September 16, 2021 N88LeaveaComment on संखुवासभा ह’त्या’का’ण्ड’मा नयाँ ट्वि’स्ट : अर्का एक व्यक्ति पनि प’क्रा’उ, अनुसन्धानले लियो नयाँ मोड
संखुवासभा । संखुवासभामा भएको सामूहिक ह’त्या’का’ण्डमा नयाँ ट्वि’स्ट आ’एको छ। मादी नगरपालिका–१ स्थित उम्लिङमा भएको सो घ’ट’नाका आ’रो’पी’लाई प्र’ह’रीले प’क्रा’उ गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसअघि प्र’ह’री’ले छिकेमी लोकबहादुर कार्कीलाई ह’त्या’ आ’रो’पीका रुपमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर हाल घ’ट’नामा अ’र्का एक व्यक्ति पनि प’क्रा’उ परेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्र’ह’री’ले यसअघि प’क्रा’उ गरिएका २५ वर्षीय लोकबहादुरका भाइलाई […]